Caqabadaha Ku Gedaaman Doorasho Ka Dhacda Somaliland
(Hadhwanaagnews) Friday, September 14, 2018 13:57:41
-Xarunta CPA (Centre for policy Analysis) ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa warbixin ka soos aartay caqabadaha ku gedaaman doorasho ka dhacda Somaliland bisha March ee kal dambe.
Xafiiska la socodka arrimaha doorashoyinka ee CPA ayaa warbixin uu soo saaray wuxuu ku soo bandhigay caqabadahaas, waxaanay CPA cid kasta oo ay arrimaha doorashadu khuseeyaan u jeediyeen baaq.
Bishii June 07, 2018 Golaha Wasiirada ee Somaliland ayaa meel mariyey Qabyo-qoraalka Xeerka Doorashada ee Somaliland, waxayna u gudbiyeen Golaha wakiillada ee Somaliland si uu
u ansixiyo. Xeerka cusub ee doorashooyinku waa mid lagu soo koobay dhamaan xeerarkii kala duwanaa ee lagu maamuli jiray doorashooyinka Somaliland. Waxa looga gol leeyahay inuu noqdo xeerka u wayn ee lagu dhaqi doono wixii khuseeyo doorashooyinka Somaliland noocay doonaan ha noqdeen. Xeerka Doorashada ee loo gudbiyey Golaha Wakiillada waxaa ku dhex jirey laba qodob oo muhiima:
Waxaan ku baaqaynaa in la xalliyo xiisadaha dhinaca ammaanka ee ka jira bariga Somaliland, sida Jabhadda hubaysan, iyo arrinta Tukaraq haddii xal loo heli karo, kuwaas oo culays dhaqaale iyo mid amniba ku yeelan kara doorashooyinka Somaliland”